Qwalasela: Ungaze uphoswe yiNkomfa | Martech Zone
Sebenzisa: Ungaze uphoswe yiNkomfa
NgoMvulo, Septemba 16, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 8, 2018 Douglas Karr
Kubonakala ngathi kuzo zonke iiveki ezimbalwa ndiyancwina njengoko ndiphosa enye inkomfa ukuba iqela labahlobo bam bayathetha okanye bayaya. Ayifani nokuba andizami ukugcina…
Nxibelelana ndiyathemba ukutshintsha loo nto ngomgca wethegi Ungaze uphoswe yenye iNkomfa.
Bapapashe ifayile ye- manifesto kwindawo yabo, iindawo ezili-10 apho sinokuphucula khona inkomfa:
Ukukhangela kwi-intanethi kwiinkomfa inesiphene. Ngakumbi ngakumbi xa uzama ukucoca iziphumo ngokwendawo, umdla, ulwimi kunye nexesha. Luhlobo lonke lobomi apho ukukhangela kusilele khona.
Ngalo mzuzu mhlawumbi ndiphoswe yinkomfa enkulu kwenye indawo kwaye awazi. Sifuna iinkqubo ezingcono ukuze zisigcine sisebenza. Endaweni yokukhangela iinkomfa iinkomfa ezifanelekileyo kufuneka zisifumane.
uninzi iiwebhusayithi zenkomfa isenza sizive ngathi ngo-1999, kwaye akukaze kube lula ukwenza amava omsebenzisi amahle kwi-intanethi. Siwuvala njani lo msantsa ubonakalayo phakathi kwabaququzeleli kunye netekhnoloji?
Ngexesha elincinci kunye nemali ekhoyo kumqeshwa oqhelekileyo oko kuthetha ukuba sihlala sinyanzeliswa ukuba sidlulise iinkomfa esifuna ukuya kuzo. Kodwa sinokuthatha inxaxheba njani ngempumelelo kwinkomfa ngaphandle kokubakho? Ngokuqhubela phambili konxibelelwano olukude oku kufanelekile namhlanje.
Kunzima kakhulu ukufumana ukufikelela kulwazi iveliswe yaza yenziwa kwinkomfa. Uya kufumana iibits kunye neziqwenga ezisasazeke kwiwebhu, kuthungelwano lwentlalo, kwiibhokisi zebhokisi engenayo nakwiidrive ezinzima. Kodwa uwufumana phi umfanekiso opheleleyo kwaye ufumane eyona nto uyifunayo?
Kwinkcubeko yethu efundisiweyo ukubanakho komntu omnye owazi ngaphezulu kwesihlwele sakhe sama-200 kuye kusiba kuncinci yonke imihla. Singabusebenzisa njani ubuchwephesha uku Vuna ubulumko obuhlangeneyo yazo zonke iingqondo ezintle eziza kwindibano yakho elandelayo?
Namhlanje uhlala ungazi ngubani oya kwinkomfa ude ubekhona ngenene. Kwaye emva kwenkomfa uhlala usilela ukunxibelelana kwakhona nomntu odibene naye. Ngokuqinisekileyo kufuneka kubekho indlela ebhetele.
Kubantu abaninzi kunokuba nzima ukuhamba usiya kubantu ongabaziyo kwaye uqale ukuthetha. Kutheni singenakuba nenkqubo kwindawo apho sinakho qalisa iincoko phambi kwenkomfa, uqhubeke kwinkomfa nasemva kokuba iphelile?
Naxa sikhona ngokwasemzimbeni yinxalenye yengqwalaselo yethu ihlala izinikele kubomi bethu kwi-intanethi. Sikuguqula njani oku kube yinto elungileyo kwindawo yenkomfa? Kwaye senza njani yenza intsingiselo kwingxolo yedijithali ehlala ibonakala ngathi iphazamisa iimeko zokufunda nzulu?
Ingqungquthela iphumelela nini? Silinganisela njani i Impembelelo yokwenyani yenkomfa, Zombini zabaququzeleli, izithethi, iindawo kunye nabazimasi? Kwidola ngalinye elichithwe kwinkomfa kufuneka sazi imbuyekezo.
Bhalisa kwaye Ndilandele kwiConferize ukuze ndizazi iinkomfa oya kuzo, uyazi apho ndithetha khona, kwaye siyakwazi ukudibana!
tags: inethiwekhi yenkomfayenza intethofumana inkomfainkomfa yentengisoinethiwekhi yokuncokola
Into ongayivanga kwiApple Keynote: iBeacons
Ubungakanani: Uhlalutyo oluShukumayo lwaBenzi beziGqibo
Sep 19, 2013 kwi-7: 16 AM
Molo Douglas-isithuba esihle kwaye enkosi ngokuthatha umdla! Ndizohlala ndixhumana.